Deg Deg Daawo Video:Haweenka Hargeisa Oo Deeq Gaadhsiiyay Maleeshiyada Gabalkeedu Sii Dhacaayo Ee Jiida, | khaatumonews
Deg Deg Daawo Video:Haweenka Hargeisa Oo Deeq Gaadhsiiyay Maleeshiyada Gabalkeedu Sii Dhacaayo Ee Jiida,
May 23, 2018 - 6 Aragtiyood
Waxaa Magaalada Hargeisa Haweenka jeegaantu kawadan kacdoon loogu magac daray caawi ciidankaga oo deeq raashin lacag iyo dhamaan Agabyo kala duwan loogu ururinaayo maleeshiyada jeegaanta ee ku sugan jiida hore tukaraq.
Warbaahinta waxaa maanta ka soo muuqday qaar kamid ah haweenka sacad muuse oo deeq ku wareejinaaya maleeshiyaadka jeegaanta.
Baqdin baa kamuuqda islaanta geed bay gacanta ku qabsaday way naxsanyihiin subxaanalaah baadilka ay taageeray aan iyo dinlaanta waxaad mooda inay wali snm yihiin. Oo dagaalkii snm miyayna cilmi kabaran mid diiniya iyo mod maadiya may ugeeyaan dadka roobka aafeeyay dhulkaan maxay karabaan waayaab aduun iyo taariikh xumada. Hawiyaha baa yaabay oo yiri kuwaan waa cawaanta africa. Dagaal aysan shaqo ku lahayn bilabaya hadanaorondoona puntland baa idishay iyo gaas gaas bay rabaan inay diyaarada kale hargaysa goljano saaraan.
kkkk Dhul dheer baad naga jirtaan kulahaa hadii laydin cawin lahaa .. DHUL DHEER BAAD NAGA JIRTAAN … WAA khalad in aaad iska timadan dhul aanad lahayn … ha idin deeqdo Burco iyoi Hargeysa … xaafadi waxa ay xaafad kale ugu wareegtaan waa xasarad … adeer … Hadii kale OGAADA .. NINKII DHOOF KU YIMMI BAY GEERIDU DHIBAYSAA .. runtii Somali qabiil baa kala kaxeeyey ,.. ogaada haday runta tegto in dhinac walba laydinka xigo oo meel aad u carar taan aad waayi doontaan walee
Hhhhhh war caruurta caanahooda u daaya ee ragaa garabyada cas cas soo dira si aad aas qaran ugu sameesaan mar kale hhhhh
waa inoo garoowe mo abdi hadal badani looma baahna iyo faataa bakh.
Sargaalka gudoomay mucaawimada wuxuu yidhi waa group kii afaraad oo haween ah oo gargaar noo keena~ suaal meeeday bagetkii iyo dhaqaalihii aad ugu talagasheen dagaalka aad biloowdeen. Hadii dagaalku dabadheeraado muxuu noqon xaalkinu ilaa iminka iyadoon laysgaarin dumarkii ayaa qaaraan aruurinayee.????
Sxb waa ay kaa qaldantaye waa dhanka kale ilaa iyo caynaba non stop